BUDDHIST TERMS' Dictionary: GOING ON ALMS ROUND - သပဒါနစာရီ
GOING ON ALMS ROUND - သပဒါနစာရီ
GOING ON ALMS ROUND Sapadᾱnacᾱrῑ
သပဒါနစာရီ - အိမ်စဉ်ရပ်၍ ဆွမ်းခံခြင်း။
ဘုရားရှင် အဆူဆူတို့သည် အိမ်စဉ်အတိုင်းရပ်၍ ဆွမ်းခံရသော ကျင့်ဝတ်ကို အလေးအမြတ်ထား၍ ပြုကြသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သား ရဟန်းတော်များလည်း ထိုအိမ်စဉ်ရပ်၍ ဆွမ်းခံခြင်းကို ကျင့်ဝတ်တစ်ခုအနေဖြင့် ဖြည့်ကျင့်ကြသည်။ အလှူရှင်များ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းရန်အတွက်သာ အိမ်စဉ်ရပ်၍ ဆွမ်းခံခြင်းအမှုကို ပြုကြခြင်း ဖြစ်သည်၊ အိမ်စဉ်လျှောက်၍ တောင်းရမ်းစားသောက်ကြခြင်းမဟုတ်။ “ဆွမ်းကို ရည်မှတ်၍ အိမ်စဉ်ရပ်ခြင်း၌ မမေ့ရ၊ ကောင်းစွာကျင့်အပ်သော ဆွမ်းခံခြင်း အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ရာ၏” ဟု - ဟောတော်မူသည်။
Stopping at every house along the daily round of gathering alms-food.
It was the cherished practice of all successive Buddhas to stop at each house to receive offerings of alms-food. This practice is followed asaduty by the bhikkhu disciples. This they do merely for the benefit of the donors and should not be construed as going a-begging for food from house to house. The Buddha enjoined the bhikkhus: “Be not negligent to go round from house to house for collecting alms-food. Take up the good practice without fail.”